A ga-enye Redmi Rịba ama 8 na Ọgọstụ 29 gọọmentị | Gam akporosis
Redmi Rịba ama 8 enweela ụbọchị ngosi
Izu ndị a na-abịakwute anyị ọtụtụ asịrị banyere Redmi Rịba 8, ụnyaahụ, onye isi ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ụfọdụ n'ime ha. Ekwentị a na-ekwe nkwa ịbụ isi mmalite maka akara ndị China. Maka dịka ekpughere izu ole na ole gara aga, ọ ga-abụ ụdị izizi nke ụlọ ọrụ na jiri igwefoto 64 MP.
E nwere asịrị banyere ekwentị nke ga-eji igwefoto MPN 64 a, mana ihe niile na-egosi na ọ ga-abụ nke a Redmi Note 8. Ekwentị nwere ụbọchị gọọmentị ịgba akwụkwọ. Dika ekpughere ya izu ole na ole gara aga, anyị ga-enwe ike ịmata ya nke ọma tupu ọnwa a agwụ.
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na netwọkụ mmekọrịta ya, na Weibo n'okwu a, na nke a bụ Redmi Note 8 A ga-ewepụta ya n’ihu Ọgọstụ 29. Ya mere, n'ime ụbọchị iri anyị ga-ama ihe niile gbasara akara ngosi ọhụụ ọhụrụ nke akara ndị China. Ekwentị mbụ nke ika a nwere ihe mmetụta 10 MP.
Banyere nkọwa ekwentị nwere ọtụtụ asịrị na ụgha, mana ruo ugbu a anyị amaghị ihe bụ eziokwu na ihe na-abụghị. Enwere ọtụtụ obi abụọ banyere nhazi ahụ nke ị ga - eji, dịka ụfọdụ ntanetị na - ezubere iche na Snapdragon 700, ebe ndị ọzọ na - ekwu na a ga - eji MediaTek Helio G90T.
N'ọnọdụ ọ bụla, na 10 ụbọchị anyị ga-ewepụ obi abụọ na anyị ga-ahụ ihe eji arụ ọrụ na Redmi Rịba ama 8. Oge dị mkpa maka akara ndị China, nke bụ otu n'ime mkpughe nke ahịa, n'ihi ekwentị dị iche iche na-eto mgbe niile ma na-eme niche na ngalaba ahịa niile.
N'ọnọdụ ọ bụla, nke a Redmi Rịba 8 ọ ga-abụ ihe nlere na etiti etiti nke akara China. Akụkụ nke na-eto eto n'ahịa na ebe anyị chọtara nhọrọ ndị na-atọ ụtọ ma dịkwa. Na Ọgọstụ 29, anyị nwere akara na akara iji zute ekwentị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi Rịba ama 8 enweela ụbọchị ngosi
Huawei Mate X ga-enwe ihe nhazi ọhụụ na kamera ọhụrụ
Kedu ekwentị igwe gam akporo Google ARCore dakọtara